Maydka diyaaradii Malaysia oo la qaatay - BBC News Somali
Image caption dab ka kacay diyaaradii ku dhacday bariga Ukraine
Dowladda Ukrain ayaa ku eedeysay mucaaradka uu Ruushku taageero bariga Ukrain, inay isku dayayaan inay baabi'iyaan cadaymaha meeshii ay ku dhacday diyaaradii Malaysia Khamiistii.
Qoraal ay soo saartay dowladda Ukrain ayay sheegtay in dad ay ugu yeertay argagixiso, ay qaadeen soddon iyo sagaal mayd oo ay geeyeen meesha maydka ee magaalada Donetsk. Waxay sheegtay in mucaaradka ay taageero ka helayaan Ruushka.
Wali jawaab lagama haayo mucaaradka iyo dowladda Ruushka eedeymahan cadaynta la qarinayo.
Hoggaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay falaagada bariga Ukraine in ay u ogolaadaan kormeerayaasha in ay si aan xaddidnayn ay u gaaran goobta ay Khamiistii ku dhacday diyaaradii rakaabka ee ay saarnayeen ku dhowaad 300 ee qof.
Kormeerayaasha ka socday midowga yurub ee loo diray goobta ay gacanta ku hayaan falaagada dalka Ukrain ee sida muuqata lagu soo riday diyaaradii Malaysia ayaa sheegaya in rag hubaysan ay ka hor istaageen in ay gaaraan ama ay arkaan burburkii diyaarada dhacday.
Afhayeenka kooxda kormeerayaasha ayaa waxa uu sheegay in rag hubaysan oo qaarkood saqraansan ay is hortaaageen iyagoo weliba buu yiri mid ka mid ah uu rasaas kor u ridayey.
Kormeerayaasha ayaa doonayey in ay halkaas ka sameeyeen xeendaab, si loo bilaabo baaritaano loona soo saaro maydadka.
Dhinaca kale madaxweynaha maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in diyaarada lagu soo riday gataal, gantaalkana laga tuuray dhulka ay maamulaan falaagada Ruushka uu taageero.
Barack Obama Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda caalamka ay jawaabo ka bixinayeen diyaarada dhacday.